Ahoana ny fananganana isenselogic.com ny tranonkalanao
Ny fananganana tranokala ho an'ny orinasanao dia mila manomboka manomboka amin'ny teny fanalahidy ampiasain'ny olona hahitanao ny serivisinao. Raha tsy nohamarinina ny tranonkalanao ho an'ny motera fikarohana dia mety ho tonga amin'ireo mpifaninana aminao ny mpanjifa vaovao.
Dingana 1: Fanadihadiana momba ny asa eo amin'ny tsena Discovery
Fakafakao ny tranonkala. Izahay dia mijery ireo metatra / teny fanalahidy, soratra sy kaody hita maso mba hahitanao hoe tsara ny toeranao eo amin'ny tranokala ho an'ireo motera fikarohana lehibe. Ohatra, manao ahoana ny fampifanarahana ny atiny amin'ny teny lakile tadiavin'ny mpanjifa?
Fakafakao ny mpifaninana aminao. Izahay dia mandinika ny tranokalan'ny mpifaninana aminao izay mitana ny laharana 5 ambony hamaritana ny paikady mahomby indrindra amin'ny fametrahana ny motera fikarohana.
Mikendry ny teny lakile mahomby indrindra. Izahay dia mamolavola lisitry ny teny fanalahidy laharam-pahamehana mifototra amin'ny zavatra tadiavin'ny mpanjifa. Inona no hosoratanao amin'ny motera fikarohana hahitana ny orinasanao na ny pejin-tranonkalanao? Raisinay avy eo io teny lakile io ary amin'ny alàlan'ny fampiasàna drafitra teny lakile Google dia afaka mahita izahay teny lakile miafina mety tsy noeritreretinao akory. Mampiasa planner Keyword ihany koa izahay hahitantsika ny isan'ny mpanjifa mitady teny fanalahidy manokana ary mikendry ireo izay hampiakatra ny vola miditra amin'ny orinasa.
Dingana 2: Fivoarana sy fikarohana momba ny teny lakile
Fanadihadiana teny lakile: Avy amin'ny lisitry ny teny lakile, dia mamantatra lisitry ny teny lakile sy andian-teny kendrena izahay. Famerenana ireo teny avy amin'ny indostria sy loharano hafa. Ampiasao ny lisitr'ireo teny lakile voalohany ary fantaro ny isan'ny fangatahan'ny motera fikarohana. Izahay avy eo mikendry ny teny lakile amin'ny alàlan'ny plural, singular sy ny andian-teny.
Tanjona sy tanjona. Izahay dia mamaritra mazava tsara ny tanjonao mialoha mba hahafahanay mandrefy ny fiverenanao amin'ny fampiasam-bola avy amin'ny programa dokambarotra hafa atolotray. Ohatra, ny tanjonao dia mety hanana fisondrotan'ny 30 isan-jaton'ny fivezivezena amin'ny orinasa. Na mety te hanatsara ny tahan'ny fiovam-po ianao ankehitriny 2 isan-jato hatramin'ny 6 isan-jato.
STEP 3: FANOLORAN-DAHATSORATRA SY FANOHANANA
Mamorona lohanteny pejy. Ny lohateny mifototra amin'ny teny lakile dia manampy amin'ny fametrahana ny lohahevitry ny pejy sy ny fikorianan'ny teny lakileo. Mamorona meta tags. Meta famaritana sy manampy amin'ny fitaomana tsindrio fa tsy ampiasaina mivantana amin'ny filaharana. Apetraho amin'ny pejy ireo dingana fikarohana stratejika. Ampidiro ao anaty kaody loharanom-pahalalana sy atiny misy eo amin'ny pejy voatondro ny teny fanalahidy voafantina. Izahay dia manome antoka fa mampihatra torolàlana naroso momba ny teny lakile iray ka hatramin'ny telo isaky ny pejy atiny ary manampy pejy bebe kokoa hamenoana ny lisitra. Izahay dia miantoka fa ny teny fanalahidy mifandraika dia ampiasaina ho fampidirana voajanahary ny teny lakileo. Manampy ny motera fikarohana hamaritra haingana ny momba an'io pejy io. Ny fomba voajanahary dia mandaitra indrindra. Fitsapana maro no mampiseho fa ny pejy misy teny 800 ka hatramin'ny 2000 dia mety hihoatra ny fohy kokoa. Amin'ny farany, ny mpampiasa, ny tsena, ny rohy atiny dia hamaritra ny lazan'ireo isa sy laharana.
Dingana 4: alao antoka fa sariaka amin'ny finday ny tranonkalanao
Araka ny Google dia betsaka ny fikarohana atao amin'ny finday fa tsy amin'ny finday birao. Ho valin'izany, Google dia nanova ny algorithman'ny fikarohana mba hankafizany ireo tranonkala tia finday. Raha tsy finday ny tranonkalanao ankehitriny dia very mpanjifa ianao.
Dingana 5: Fitsapana sy fandrefesana mitohy
Fitsapana sy refy: diniho ny laharan'ny milina fikarohana sy ny fivezivezena amin'ny tranonkala hahitana ny fahombiazan'ny programa nampiharinao, ao anatin'izany ny fanombanana ny fahombiazan'ny teny lakile tsirairay. Tsapao ny valin'ny fanovana, ary araho ao anaty takelaka Excel ny fanovana, na izay ahazoanao aina.
Maintenance. Ilaina ny fanampiana sy fanovana ny teny fanalahidy sy ny votoatin'ny tranokala mba hanatsarana hatrany ny filaharan'ny motera ka tsy hitombo na hiala ny fanaovana tsirambina ny fitomboana. Ianao koa dia te-hijery ny paikadinao rohy ary hiantoka fa ny rohy miditra sy ivelany dia mifandraika amin'ny orinasanao. Ny bilaogy dia afaka manome anao ny firafitra ilaina sy ny fanamorana ny fanampiana atiny ilainao. ny orinasa fampiantranoana matetika dia afaka manampy anao amin'ny fametrahana / fametrahana bilaogy.